Imveliso yefektri - China Imveliso yabenzi kunye nababoneleli
Sicinga ukuba abathengi bacinga ntoni, ukungxamiseka kokuthatha inxaxheba kwimfuno zabathengi zomgaqo, ukuvumela umgangatho ongcono, iindleko eziphantsi zokuqhubekeka, amaxabiso asengqiqweni ngakumbi, aphumelele abathengi abatsha nabadala inkxaso kunye nesiqinisekiso seMveliso, Abaphathi bamasango, Pipe uqinisa uqinisa, Izixhobo Black Pipe neZilinganisiSiyabamkela abathengi, imibutho yamashishini kunye nabahlobo abavela kuzo zonke iindawo zehlabathi ukuba banxibelelane nathi kwaye bafune intsebenziswano ngezibonelelo ezifanayo. Sigcina ukuphucula nokuphucula izinto zethu kunye nokulungiswa. Kwangelo xesha, senza ngokubonakalayo ukwenza uphando kunye nenkqubela phambili yeeMveliso, eyona mgangatho ubalaseleyo kunye noqobo lweentsimbi zezona zinto zibalulekileyo kwezothutho. Sinokuncamathela ekunikezeleni ngenxalenye yokuqala kunye nomgangatho olungileyo kwanenzuzo encinci oyifumeneyo. UThixo uya kusisikelela ukuba senze ishishini lobubele ngonaphakade.
Iinkcukacha 1.Ukulungiswa kwamapayipi ombhobho wentsimbiUkuveliswa kwemveliso yethu kwenziwa ngokweemfuno ze-EN-GJMB-300-6 ngamandla aqine min 300 N / mm2 kunye nobude kwimizuzu engama-6% .Amandla oqobo okwenyani aphezulu kunama-300. ukufikelela ku-330 kwaye ubude bunokufikelela kwi-8% Oko kukuthi izinto zethu ziphakathi kwe-EN-GJMB-300-6 kunye ne-EN-GJMB-330-8. 2.Usetyenziso: umbhobho zentsimbi oluthambileyo izinto zokubopha izixhobo ezisetyenziselwa ukudibanisa tubing yentsimbi, diff ...
Iingono zentsimbi zekhabhoni zinobungakanani obuchanekileyo, indlela yokuziphatha engcono kunye nokuqina, kwaye zisetyenziswa ngokubanzi kumandla olwakhiwo, ukuqhubekeka, kunye nokwenza amashishini Sinikezela uluhlu olubanzi lweCarbon Steel Nipple. Kwaye yenziwe liqela lobuchwephesha kusetyenziswa ibakala lekhabhoni yentsimbi kunye noomatshini bokuqhubela phambili kwezobuchwephesha.
Ukudityaniswa okukhawulezayo esivelise ikakhulu kususwe i-socked, nut, kunye ne-clamp njl.njl. Ngokubanzi, yonke imilinganiselo ichanekile, kuba kubaluleke kakhulu ukudibana. Kuzo zonke iziseko ngaphambi kokuba zithunyelwe sonke senza uvavanyo lwe-100% yoxinzelelo lomoya. Umphezulu idiphu eshushu iqaqanjiswa kwaye emnyama, sikwathumela ngaphandle imveliso erhabaxa.
Ukudibanisa itywina elipheleleyo lokudibanisa itywina yenziwa ngentsimbi edityanisiweyo kwaye idibanisa uxinzelelo lomoya kunye nomphunga wombhobho kunxibelelwano lwendoda lweNPT. Inesiphelo esine-barbed yokwenza itywina eliqinileyo kwithumbu xa isetyenziswa ngombhobho wombhobho okanye umkhono we-crimp okanye i-ferrule (engafakwanga) kunye nemisonto ye-National Pipe Taper (NPT) yomfazi kwelinye ukunxibelelana kunxibelelwano lwendoda lwe-NPT. Olu fakelo lwenziwe ngentsimbi exutywe namandla, ukungahambelani, ukungasebenzi kakuhle, kunye nokumelana nokubola, kwaye inesihlalo sepolymer sokumelana neekhemikhali. Ukucetyiswa kombhobho opheleleyo wokudibanisa itywina emhlabeni kuyacetyiswa ngenkonzo yomphunga ukuya kuthi ga kuma-450 degrees.
Iintsimbi oluthambileyo zibandakanya iingqiniba, iti, yemiqadi yokuhlanganisa kunye esisangqa ngeenxa njalo esisangqa Floor ithandwa kakhulu ukuba iankile izinto emhlabeni. Izixhobo ngobuciko High uqinisekiso lomgangatho. Umzi-mveliso wethu ngowokuqala ukusebenzisa isitovu sombane sokuphosa kunye nendawo yombane kwinkqubo yokuhluza kunye nokomisa, ngaphandle kokuba siphucule izixhobo, sisebenzisa iigobolondo ezimthubi, iimpahla eziveliswe ngumgca wokuphosa omtsha nokuba ungaphakathi okanye ngaphandle ugudile kwaye uyakhanya .
Ukuhanjiswa komoya okuxineneyo, ukudibanisa izixhobo zomoya kunye neenkqubo zomoya, iinkqubo zamanzi kushishino, kwiindawo zokwakha, ezolimo kunye nokulima.
Ezimbini Bolt Pipe uqinisa, Stainless Hose Quick Qhagamshela, Amacango amhlophe, NeZilinganisi umbhobho kunye yemiqadi yokuhlanganisa, Aluminium Pipe neZilinganisi, Isinxibelelanisi soMbane woMoya, Isinxibelelanisi soMbane soMoya oMdaka, Ukubekwa kweNsimbi emnyama, Ukunciphisa Ingono engenasici, Umbhobho kwalenza neZilinganisi,
Air Hose Coupling Europen Uhlobo, Ukudibanisa uMbhobho womoya, Iingono Stainless kunye neZilinganisi, Iingono zensimbi ezingenanto, Imibhobho Stainless Stainless, Coupling yomoya,